जव लास बाकसमा आयो, सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुब्यो ! « Rara Pati
जव लास बाकसमा आयो, सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुब्यो !
२० कार्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया रहेका हिमबहादुर शाहीको असोज २३ गते असमायिक निधन भयो । दैलेख जिल्ला चामुण्डाविन्द्रासैनी वडा नं. ६ लैनचौर निवासी उनी भलिवलका राम्रो खेलाडी समेत थिए । उनले भलिवल खेलका माध्यमबाट दैलेख जिल्लामा ख्याती कमाएका थिए । २०६१ सालमा नेपाल आर्मीमा भर्ती भए तापनि भलिवल खेलप्रतिको लगावका कारण आर्मीको जागिर छोडेर भलिवल खेल नै रोजे ।
कालान्तरमा भलिवल खेलेर जीविका चलाउन नसक्ने अवस्था भएकाले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका थिए । सायद उनका नाबालक छोराछोरी बुवा दसैँमा घर आउने बाटो हेर्दै वा आफूलाई बुवाले नयाँ नयाँ लुगाफाटा पठाई दिने आशामा थिए होलान । उनकी श्रीमती तथा परिवारजनले पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि थारै भएपनि सुखी जीवन बाँच्ने सपना देखेका थिए होलान् । अपसोच चाडवाडको सम्मुखमा हिमबहादुरले परदेशमा असमायिक निधन भएको खबरले उनको परिवार तथा गाउँघरलाई नै शोकमग्न बनायो ।
आज कात्तिक २० गते उनको लास काठको बाकसमा घर पुग्यो । काठको बाकसमा प्याकिङ भएका आएको लास देख्दा हिमबहादुरका छोरा, श्रीमती, परिवारजन भक्कानिएको दृष्य निकै नै हृदयविदारक थियो । परिवारजन र आफन्त मात्र होइन यो दृष्य हेर्ने जो कसैलाई पनि असाध्यै भावविह्वल बनायो । हिमबहादुर सिङ्गो गाउँलाई नै आँशुमा डुवाएर विदा भए । उनको आजै पञ्चकोशी तिर्थस्थलका नामले परिचित पवित्र पादुकास्थानमा हिन्दु परम्परा अनुसार दाहसंस्कार गरिएको छ ।
असोज ३, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङ खोला गाउँमा छ जनाको सामूहिक हत्यामा संलग्न
असाेज ३, काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बित्यो । संविधान दिवस मनाइरहँदा
संबिधान दिवसको अवसरमा तीनवटा विवाह गर्ने वडा अध्यक्षले पाए आम माफी
असोज ३, सुर्खेत । संविधान दिवसको अवसरमा सल्यान जिल्लाका तीनवटा विवाह गर्ने वडाध्यक्षले आम माफी
संविधान दिवसका अवसरमा विभूषण : सुरक्षा निकायका २२१ जनालाई विभिन्न पदक
असोज ३, काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा ९०३ जनालाई विभिन्न पदक प्रदान गरेको छ